“ရှင်ဘုရင် တော်ကောက်ခံရမယ့် မိန်းမတွေဟာ…သူတောင်းစားတွေနဲ့ လွဲတတ်ပါတယ်” - Padaethar
လောကမှာ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ တွေ့ကြုံဆုံကွဲ ဖြစ်ကြရတာ ဓမ္မတာပါ… ဘာထူးဆန်းလို့လဲလို့ မေးချင်စရာ…
ထူးဆန်းတာတာကတော့…အဲဒီမိန်းမတစ်ယောက်ဟာ…ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမရှိ…တန်ဖိုးမထား…ကိုယ့်အပြင် အခြား အခြားသော မိန်းမတကာ မိန်းမတွေကို လစ်ရင်တွယ်…ချောင်ရင်နှိုက်…ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းကို ရထားပြီဆိုရင်တော့…အဲဒါ….ထူးဆန်းနေပြီ…
ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ် စိတ်ဓာတ်မရင့်ကျက်ခင်ကာလတွေ…တရားတွေ ကို နားနဲ့ပဲနာခဲ့ပြီး နှလုံးသားနဲ့ မနာတတ်ခင်ကာလတွေတုန်းက…ယောကျာ်းတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ဖောက်ပြန်တာ ခံရပြီဆို..ပထမဦးဆုံး…သူ့ကိုဒေါသထွက်တယ်…..
ဒုတိယ… ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒေါသထွက်တယ်….တတိယ…သူနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမကို ဒေါသထွက်တယ်အခုတော့…အဲလို (၃) မျိူးသော ဒေါသတွေ မရှိတော့ဘူး..ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းဟာ…ကိုယ်နဲ့တွေ့ပြီးမှ ဖောက်ပြန်တာ မဟုတ်ပါဘူး…
သူ့ရဲ့ မွေးရာပါ အငုံ့စိတ်ကိုက သူ့အသွေးအသား အတွေးထဲမှာ ပါလာခဲ့ပြီးသားပါ…အခွင့်အရေး မကြုံလို့သာ…သူလုပ်ခွင့်မရခဲ့တာပါ…ဒါကြောင့်…ကိုယ်နဲ့မယူခင် Single ဘဝမှာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းကို ကိုယ်နဲ့ယူပြီးမှ ငြိမ်မယ် မထင်လိုက်ပါနဲ့…..
ကိုယ်နဲ့လက်ထပ်ပြီးမှ ဖောက်ပြန်တဲ့ ယောကျာ်းကို သူနဲ့ ကလေးရလုိက်ရင် ငြိမ်သွားမယ် မထင်လ်ိုက်ပါနဲ့ကိုယ်သာ…တစ်ခုလတ် ကလေးအမေ ဘဝတွေ ရောက်သွားမယ်…သူတို့ကတော့ ခြံခုန်ကောင်းနေတုန်းပါပဲ..
မိန်းမတစ်ယောက် ဘဝမှာ…အကုသိုလ်ကံ သိပ်ကြီးလွန်းနေရင်လည်း…အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်း ၊ မိန်းမတွေနဲ့ ပွေလီဖောက်ပြားတတ်တဲ့ ယောကျာ်းမျိူး၊ဆိုးသွမ်းနေတဲ့ ယောကျာ်း မျိူးဖြစ်နေလည်း တွေ့နေရလည်း အဲဒီမိန်းမစိတ်ထဲ ၊
အတွေးထဲ ၊ အသိစိတ်ထဲမှာ… ဒီယောကျာ်းဟာ ငါတစ်နေ့မှာ ပြောင်းလဲလုပ်ယူ ပြုပြင်ယူလို့ ရနိင်မယ့် ယောကျာ်းလို့ ဘဝင်လေဟက်ပြီး ထင်နေတတ်ကြတယ်…အကုသိုလ် ကံ အမှောင်က အရမ်းများလွန်းနေတော့…အသိအလင်းတန်းက တော်ရုံနဲ့ ထိုးမဖောက်နိုင်ဘူး
ဘုရားဟော တရားတော်ထဲမှာ ရှိပါတယ်ငရဲသားတစ်ယောက်ဟာ…ခေါင်းမှာငရဲစက်သွားစက်ကြီး တင်ခံထားရပြီး သွေးစိမ်းရှင်ရှင်တွေ နီမြန်းနေအောင် စီးကျပြီး ငရဲဝဋ်ကို ခံနေရစဉ်…နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ ငရဲသားဖြစ်မယ့်သူက…သူ့မျက်လုံးထဲမယ်…
ငရဲခွေးသွားစက်ကြီးကို ပတ္တမြားပန်းခိုင်ကြီး နီမြန်းနေတာကြီးကို ခေါင်းမှာဆင်ပြီး လှနေတယ်လ်ို့ မြင်ပြီး အတင်းကို လုပန်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်…ဒါကြောင့်…ဖောက်ပြန်တဲ့ ယောကျာ်းကို လက်လွှတ်ရမှာ စိတ်က ဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့အခါ….သူများနောက် ကိုယ့်ကိုထားပြီး ပါသွားတဲ့အခါမှာ…
မိန်းမတွေစိတ်ထဲ…ငါတို့အကုသိုလ်ကံ ပေးဆပ်ရဖို့ ဝဋ်ကြွေးတွေ ဒီအချိန်မှာ ကျေပြီမို့…နောက်လူက ပတ္တမြား ပန်းအထင်နဲ့. လုယူပန်ဆင်တာဖြစ်တယ်….ငါတို့ ကုသိုလ်ကံလေးတွေ ပြန်အလင်းပွင့်လာပြီဖြစ်လို့….ကိုယ့်ဘဝကိုယ် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ဖြတ်သန်းရှင်သန်ခွင့်ကို ရလိုက်ပြီလို့သာ…တွေးပြီး ဝမ်းသာကြည်နူးဖြစ်ကြပါ….
အကုသိုလ်ကံ သိပ်များနေချိန်မှာ….မိန်းမတွေဟာ…ယောကျာ်းယုတ် ၊ ယောကျာ်းဆိုး တွေနဲ့ တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်…..မိန်းမသားများအားလုံး…ကုသိုလ်စိတ်လေးတွေ အပြည့်နဲ့.. တစ်ယောက်တည်း ဘဝကို ကျေနပ်လှပစွာ ဖန်တီးပုံဖော်နိုင်ကြစေဖို့.. အားပေးဆုတောင်းပေးပါတယ်။
“ရှင်ဘုရင် တော်ကောက်ခံရမယ့် မိန်းမတွေဟာ…သူတောင်းစားတွေနဲ့ လွဲတတ်ပါတယ်”…….။orginal writer
မိနျးမ တဈယောကျရဲ့ အကုသိုလျကံ
လောကမှာ ယောကျြားနဲ့ မိနျးမ တှကွေုံ့ဆုံကှဲ ဖွဈကွရတာ ဓမ်မတာပါ… ဘာထူးဆနျးလို့လဲလို့ မေးခငျြစရာ…
ထူးဆနျးတာတာကတော့…အဲဒီမိနျးမတဈယောကျဟာ…ကိုယျ့အပျေါ သစ်စာမရှိ…တနျဖိုးမထား…ကိုယျ့အပွငျ အခွား အခွားသော မိနျးမတကာ မိနျးမတှကေို လဈရငျတှယျ…ခြောငျရငျနှိုကျ…ဖောကျပွနျတတျတဲ့ ယောကျြားကို ရထားပွီဆိုရငျတော့…အဲဒါ….ထူးဆနျးနပွေီ…
ကြှနျမငယျရှယျစဉျ စိတျဓာတျမရငျ့ကကျြခငျကာလတှေ…တရားတှေ ကို နားနဲ့ပဲနာခဲ့ပွီး နှလုံးသားနဲ့ မနာတတျခငျကာလတှတေုနျးက…ယောကျြားတဈယောကျ ကိုယျ့ကို ဖောကျပွနျတာ ခံရပွီဆို..ပထမဦးဆုံး…သူ့ကိုဒေါသထှကျတယျ…..
ဒုတိယ… ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဒေါသထှကျတယျ….တတိယ…သူနဲ့ဖောကျပွနျတဲ့ မိနျးမကို ဒေါသထှကျတယျအခုတော့…အဲလို (၃) မြိူးသော ဒေါသတှေ မရှိတော့ဘူး..ဖောကျပွနျတတျတဲ့ ယောကျြားဟာ…ကိုယျနဲ့တှပွေီ့းမှ ဖောကျပွနျတာ မဟုတျပါဘူး…
သူ့ရဲ့ မှေးရာပါ အငုံ့စိတျကိုက သူ့အသှေးအသား အတှေးထဲမှာ ပါလာခဲ့ပွီးသားပါ…အခှငျ့အရေး မကွုံလို့သာ…သူလုပျခှငျ့မရခဲ့တာပါ…ဒါကွောငျ့…ကိုယျနဲ့မယူခငျ Single ဘဝမှာ ဖောကျပွနျတတျတဲ့ ယောကျြားကို ကိုယျနဲ့ယူပွီးမှ ငွိမျမယျ မထငျလိုကျပါနဲ့…..
ကိုယျနဲ့လကျထပျပွီးမှ ဖောကျပွနျတဲ့ ယောကျြားကို သူနဲ့ ကလေးရလိုကျရငျ ငွိမျသှားမယျ မထငျလိုကျပါနဲ့ကိုယျသာ…တဈခုလတျ ကလေးအမေ ဘဝတှေ ရောကျသှားမယျ…သူတို့ကတော့ ခွံခုနျကောငျးနတေုနျးပါပဲ..
မိနျးမတဈယောကျ ဘဝမှာ…အကုသိုလျကံ သိပျကွီးလှနျးနရေငျလညျး…အကငျြ့စာရိတ်တ မကောငျး ၊ မိနျးမတှနေဲ့ ပှလေီဖောကျပွားတတျတဲ့ ယောကျြားမြိူး၊ဆိုးသှမျးနတေဲ့ ယောကျြား မြိူးဖွဈနလေညျး တှနေ့ရေလညျး အဲဒီမိနျးမစိတျထဲ ၊
အတှေးထဲ ၊ အသိစိတျထဲမှာ… ဒီယောကျြားဟာ ငါတဈနမှေ့ာ ပွောငျးလဲလုပျယူ ပွုပွငျယူလို့ ရနိငျမယျ့ ယောကျြားလို့ ဘဝငျလဟေကျပွီး ထငျနတေတျကွတယျ…အကုသိုလျ ကံ အမှောငျက အရမျးမြားလှနျးနတေော့…အသိအလငျးတနျးက တျောရုံနဲ့ ထိုးမဖောကျနိုငျဘူး
ဘုရားဟော တရားတျောထဲမှာ ရှိပါတယျငရဲသားတဈယောကျဟာ…ခေါငျးမှာငရဲစကျသှားစကျကွီး တငျခံထားရပွီး သှေးစိမျးရှငျရှငျတှေ နီမွနျးနအေောငျ စီးကပြွီး ငရဲဝဋျကို ခံနရေစဉျ…နောကျထပျရောကျလာတဲ့ ငရဲသားဖွဈမယျ့သူက…သူ့မကျြလုံးထဲမယျ…
ငရဲခှေးသှားစကျကွီးကို ပတ်တမွားပနျးခိုငျကွီး နီမွနျးနတောကွီးကို ခေါငျးမှာဆငျပွီး လှနတေယျလို့ မွငျပွီး အတငျးကို လုပနျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ…ဒါကွောငျ့…ဖောကျပွနျတဲ့ ယောကျြားကို လကျလှတျရမှာ စိတျက ဝခှေဲမရဖွဈနတေဲ့အခါ….သူမြားနောကျ ကိုယျ့ကိုထားပွီး ပါသှားတဲ့အခါမှာ…
မိနျးမတှစေိတျထဲ…ငါတို့အကုသိုလျကံ ပေးဆပျရဖို့ ဝဋျကွှေးတှေ ဒီအခြိနျမှာ ကပြွေီမို့…နောကျလူက ပတ်တမွား ပနျးအထငျနဲ့. လုယူပနျဆငျတာဖွဈတယျ….ငါတို့ ကုသိုလျကံလေးတှေ ပွနျအလငျးပှငျ့လာပွီဖွဈလို့….ကိုယျ့ဘဝကိုယျ လှတျလပျပေါ့ပါးစှာ ဖွတျသနျးရှငျသနျခှငျ့ကို ရလိုကျပွီလို့သာ…တှေးပွီး ဝမျးသာကွညျနူးဖွဈကွပါ….
အကုသိုလျကံ သိပျမြားနခြေိနျမှာ….မိနျးမတှဟော…ယောကျြားယုတျ ၊ ယောကျြားဆိုး တှနေဲ့ တှကွေုံ့ရတတျပါတယျ…..မိနျးမသားမြားအားလုံး…ကုသိုလျစိတျလေးတှေ အပွညျ့နဲ့.. တဈယောကျတညျး ဘဝကို ကနြေပျလှပစှာ ဖနျတီးပုံဖျောနိုငျကွစဖေို့.. အားပေးဆုတောငျးပေးပါတယျ။
“ရှငျဘုရငျ တျောကောကျခံရမယျ့ မိနျးမတှဟော…သူတောငျးစားတှနေဲ့ လှဲတတျပါတယျ”…….။orginal writer